Kucaciswa ngabafanele ukufaka i-mask - Ilanga News
Home Izindaba Kucaciswa ngabafanele ukufaka i-mask
Kucaciswa ngabafanele ukufaka i-mask
Asephendulwe nemfashini ngabathandi bengqephu
AMA-MASK asesitayeleni atholakala ngezinhlobo eziningi ezingahambisana nomsiko owugqokile.
UKUBHEDUKA kwegciwane i-COVID-19 nokuthengwa ubuthaphuthaphu kwezivikeli magciwane ikakhulukazi ama-surgical mask, sekwenze abathandi bengqephu babona intuba yokuthunga ama-mask okuhloba njengenye yezindlela ezisesitayeleni zokuzivikela kuleli gciwane.
Ukubhebhetheka kweCOVI-19 nokuqhakanjiswa kokufaka ama-mask, kufake isigxivizo sokuthi angenye yezindlela zokuhloba ezizoba sesitayeleni kulo nyaka.
Nakuba lokhu kungenye yemizamo yokuhlangabezana nokwesweleka kwalezi zivikeli, ezithengwa ubuthaphuthaphu ezitolo, osomfashini bathi kubalulekile ukuba umuntu azivikele ngendlela esesitayeleni.
UNosipho Sithole, owaziwa ngelikaNosi Tyra, waseBlauuwbosch, ngaphandle kwaseNewcastle, ungomunye wabathungi bengqephu asebebone ibhizinisi kulokhu.
Uthi umcabango wokwenza ama-mask umfikele ngonyaka odlule ehambele ingqungquthela yokucobelela ngolwazi kulo mkhakha eChina.
AMA-MASK KWEZEMFASHINI AQALE NGO-2015 E-FRANCE
“Ngaleso sikhathi lalingakadumi kakhulu leli gciwane, kwakuseyinto esasiyizwela kude. Ngathenga i-mask eyodwa ngazitshela ukuthi ngizokopela kuyona iphethini yokuthunga engizowadayisa lapha.
“Ngangingazitsheli ukuthi kuzofika isikhathi lapho esedingeka khona njengoba sekwenzeka manje,” kusho uNosipho.
Ngendlela awathunge ngayo awakhe, uthi ashiye isikhala ngaphakathi sokufaka i-wipe noma i-tissue ukwengeza ukuzivikela emagciwaneni, okuyiyona oyishintshayo uma usuyisebenzise isikhathi eside.
Ngaphandle kokubona ithuba lebhizinisi, uNosipho uthi leli su bekungelokucabangela umphakathi oselokishini ongeke ukwazi ukufinyelela ezitolo uyothenga ama-mask.
“Lona bekungomunye wemizamo yami yokuba umphakathi ukwazi ukuzivikela ngamanani aphansi. Kunalokho ngesekwe kakhulu ngezinye izinhlanga zifaka izindimbane zama-oda. Umphakathi wakithi kunalokho ukhethe ukungibiza ngamagama, bangetha elikaCorona,” esho.
Ukungenisa kwama-mask kwezemfashini kubonakale kwiParis Fashion Week, yango-2015 ngesikhathi umsiki wengqephu waseChina, uMasha Ma, ekhangisa ngengqephu yakhe eyayihlobe ngawo. Aphinde avela futhi ngo-2016 kwi-runway kukhangisa umsiki wengqephu wase-India, uManish Arora.
ALUNGELE ASEBEHAQWE YIGCIWANE, UKUNGALIBHEBHETHEKISI
Nabaculi baphesheya abakho-nzwe kakhulu yintsha, u-Ariana Grande noBillie Eilish bake babonakala kweminye yemizungezo yabo nasemicimbini emikhulu behlobe ngawo.
Ngokomyalelo wezempilo, ama-mask kufanele afakwe yilabo asebehaqwe yileli gciwane ukuvikela labo abangakabi nalo ukuba bangatheleleki.
Bathi ukuthengwa kwawo inqwaba yilabo abangawadingi, kubeka engcupheni impilo yalabo asebehaqekile kwazise
yibona nezisebenzi zezempilo abawadinga kakhulu. Baphinde bexwayisa ngobungozi bokumbondelana kwamagciwane uma umuntu eseyifake isikhathi eside nokuthi kakuwona wonke angakuvikela kuleli gciwane.
AbeNational Institute for Communicable Diseases (NICD), okuwuphiko olubhekelele izifo ezithathelanayo, baveze ukuthi ngabantu abanaleli gciwane nalabo ababanakekelayo kanye nezisebenzi zezempilo nabezimo eziphuthumayo okumele bafake ama-mask ukuzivikela.
IZINHLOBO ZAMA-MASK NEZINDLELA ZOKUZIVIKELA
− I-surgical mask: Isetshenzi-swa kakhulu ngodokotela ukuvi-kela ukungathelelani ngamagciwane neziguli. Yiyona enconywayo ukuvikela ukungatheleli omunye umuntu ngegciwane uma ukhuluma, uthimula noma ukhwehlela. Kumele ungayifaki isikhathi eside.
− N95 respirator: Ivikela ukuba izintuli namakhemikhali zinga-ngeni emakhaleni. Igqokwa kakhulu yizisebenzi zezempilo ukuzivikela emagciwaneni athelelana ngomoya.
− P100 respirator noma i-gas mask: Lena ngeyabenza imisebe-nzi efana nokupenda nokubaza, kakufanele igqokwe ukuzivikela kulolu bhubhane.
− Full face respirator: ifakwa ngabapendayo ikakhulukazi nalabo abachitha isikhathi esiningi endaweni enomusi negesi. Ivikela namehlo futhi ifanele labo abanentshebe ukuze ubuthi noma amagciwane anganamatheli kuyona.
Osengenwe yileli gciwane, angayisebenzisa ikakhulukazi uma enenkinga yokuphefumula njengoba amanye awo kuthiwa anama-pump angenisa umoya.
Previous articleOshiye emaphoyiseni usenebhizinisi lokuhlanza
Next articleAkaliphosile ithawula ngomsakazo